Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Gear
Ukuba uthe wafisa kakhulu uye wafumana amava ambi ngenduku kunye ne-reel engafanisani , okanye uzame ukusebenzisa intonga kunye ne-reel ukuba ayifanelekanga uhlobo lokuloba owenzayo. Ayikho yonke into ehambelana nayo yonke intonga, kwaye akukho nto yokuloba ingasetyenziswa kuzo zonke iintlobo zokuloba okanye zonke izinto zokuloba.
Ukuba unenjongo yokuphosa kunye nokukhanya okulula, umzekelo, udinga i-reel encinci yokujikeleza kunye nentonga yokukhanya .
Faka intsimbi encinci yokujikeleza ngentonga enzima kwaye ayiyi kusebenza ngokufanelekileyo. Uzakufumana kunzima ukuphosa, kwaye mhlawumbi uya kuphula umgca wakho kwaye ulahlekelwe yintlanzi kuba intonga kunye ne-reel ayifani. Into efanayo iya kwindoda enzima kunye nentambo elula. Kuya kusebenza kodwa kungekhona kunye nesambatho esifanelekileyo.
Nasi omnye umzekelo. Ukuba uqubela i-jigs enzima kumatshini e-hydrilla, uya kufuna isidonga esinamandla kakhulu, mhlawumbi imodeli ye- baitcasting , kunye ne-reel eqinile ene-65-pounds-test (or weighty). Nayiphi na enye ingubo iya kukugcina ekubanjeni iintlanzi ezininzi njengoko kungenjalo ngenxa yokuba awuyi kukwazi ukusebenzela ukunyanzela ngokufanelekileyo okanye ukulwa ne-bass kwi-cover cover. Ngoko ngokuqinisekileyo ngeke ukwazi ukuloba ngokufanelekileyo.
Ukukhangela nge- crankbaits encinci, intonga ye-action action fast. Udinga isilumko sokukhanya ukuphosa ilanga ngakumbi, kodwa omnye umqolo wokulwa nokulawula intlanzi.
I-reel kufuneka ifane kwaye ikwazi ukulawula umgca wokuhlola u-8- ukuya kwe-12, oluhlu olufanelekileyo lokusetyenziswa ngala maqhina. Nangona kunjalo, ukuba ulahla i-crankbaits enkulu, i-crankbaits enzulu, ufuna indonga ende kunye ne-baitcasting reel kunye ne- gear ratio gear kunye neigesi ezinamandla , ukuze ukwazi ukufumana ezi zilingo ezinzima.
Ukuloba kweplastiki kunokuhluka kakhulu, ngoko kufuneka uqhathanise intonga yakho, i-reel, kunye nomgca wolu hlobo lwekhava edibeneyo kunye nobunzima bokucoca. Ukuba usebenzisa i-¼-ounce sinker nge-6-inch worm kunye neendonga zokuloba, udinga ingubo elula ngaphezu kokuba ulahle i-1-ounce sinker kwi-Carolina rig. Okufanayo kuya kumajig. Ndidla ngokusebenzisa i-jig ye-3/16-ounce ne-trailer yomsila kunye ne-7-foot foot-baitcasting rod ngentonga yokukhanya. Isalathisi se-baitcasting senziwe nge-10 ukuya kwe-12-test- flularcarbon line line . Ngomgca wokukhanya, udinga inkqubo efanelekileyo yokudonsa, kodwa le ngubo isebenza kakuhle nale ngxaki.
I-Spinnerbaits inokuthi idizwe kwintonga enzima, kodwa i-tip light is helping casting. Ufuna isalathisi esinamandla esithwele nge-14-pounds okanye umgca onzima. Ukutshintshwa kwintsimbi kungasetyenziselwa, kodwa intonga kufuneka ibe ne-backbone eninzi; ngokuqhelekileyo, isambatho sokubhabha i-baitcasting ifanelekile ukusetyenziswa kunye ne-spinnerbaits. I-Bass idla ngokukhawuleza i-spinnerbait kanzima ngoko ufuna iingubo eziza kukutshatyalaza kwaye ikuvumele ukuba ulawule intlanzi.
Ukudibanisa intonga yakho kunye nesibindi, kunye nomdlalo ukuloba uhlobo oluthile lokuloba olwenzayo ukuba lube lula, lusebenza kakuhle kwaye lunandi.
Eli nqaku lihlelwe kwaye lihlaziywa nguNgcali wethu wokuLoba uLwandle oluManzi, uKen Schultz.
Indlela yokuseta i-Texas Rig yeeVilom kunye ne-Soft Plastic Corure
Iindlela ezili-12 zokugwema umgca, i-Snarls, ne-Tangles
IPenn Slammer 460 yokuThuthukisa
Ukunyamekelwa kunye nokugcinwa kwe-Drysuit: I-Quick Checklists for Divers
Imibala emihle yePilms Worms
Ukulungiswa Kokuhle kweBass Fishing
Ngaluphi uhlobo lweNkokheli endiyidingayo?
Ukukhanya OkuKhulu Oku-4 OkuKhulu Okubalulekileyo-Ukujongana Neentambo Zobuncwane Bokudoba Amanxweme oLwandle lokuSasa
8 Ulawulo lweMigqaliselo
I-Best Sage Fly Fishing Rod Rods
I-Chlorophyll Inkcazo kunye nomsebenzi kwi-Photosynthesis
Iinkonzo zaseNdiya zasendulo
Iiklasi zokuthatha ngaphambi kokufaka isicelo kwiSikolo soMthetho
Yintoni ininzi yangaphandle kwesiNgesi kwisiGrike?
Indlela Yokuhamba Ngamanzi (I-Non-Newtonian Fluid Science Experiment)
I-Exploding Bombardier Beetles
C # Iprogram yoThutho - iProgramming Advanced Winforms ku-C #
Uhambo lweSigama sabafundi besiNgesi
Indlela Yokubamba UThixo / UThixokazi Ophulukisayo Isithethe
Ukuthotywa kwengcaciso (iNzululwazi)
Ngaba Ufanele Uthenge Izicathulo Ze-Gymnastics?
Neanderthals - Isikhokelo soFundo
Fumana i-Anode kunye neCathode yeSelive yaseGalvanic
Yazi Ipeyinti Yakho Imibhobho: Izinwele kunye namaBristles
Iibhanki zokuqwashisa umdlavuza webele
UTrgood Marshall: Ummeli weLungelo loLuntu kunye noMthetho weNkundla ePhakamileyo yase-US
Ngubani owabulala iPancho Villa?
Ukunyanzeliswa kunye neNdima yabo kwiNguqulelo
Ukuqonda amaHopophoni awazi kwaye ayikho